♫ ♪ တခါတလေမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေကို ညည်းတတ်တယ် | ပြည့်စုံ
ဟေး ၂ ကွ..
နာက ဒီသီချင်းတွေ ရှိပြီးသားပဲ။ မေလေးကို တဂ်ရင်တော့ သီချင်းတွေ ရွေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းနီးပါး ပါးစပ်ထဲရောက်တဲ့ သီချင်းကို ညည်းနေတတ်လို့လေ။ ......ဟုတ်သေးဘူး။။ သူက တဂ်ပိုစ့်တွေပဲ ရေးနေတယ်။ သူ့ကို တဂ်မှပဲ သူက ပိုစ့်တင်တယ်။ အလုပ်များနေတယ်ဖြစ်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
ကိုပြည့်စုံက သီချင်းအေးအေးလေးတွေ ကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော်..
အရာရာကို လေးလေးနက်နက်ခံစားတတ်တယ်ထင်ပါ့.... စိတ်ပင်ပန်းမယ်... :)
သီချင်းလေးတွေ လာနားထောင်သွားဒယ် ကိုပြည့်စုံကြီးရေ ဟိဟိ
အံမယ်........ လူကြမ်းကြီး ညည်းတဲ့ သီချင်းတွေကလဲ လူနဲ့ မလိုက်ဘူးဗျ။ အဟီးးးးးး နုရွနေသလိုပဲ။ ဟိဟိ
သီချင်းလေး ညည်းရင်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။။။။။
အဲ..ဒီလူကြမ်းလေးက မန့် ပြီးအော်သွားတယ်ဆိုတော့ လာပြန် မန့် အော်ပါတယ်...သူများဆီမှာ မျိုးကျော့မြိုင် သီချင်းလည်းဆိုသွားတယ်..ဦးစံရှားလိုလဲ ပြောသွားသေးတယ်...ဗဒင်လိုလည်း ဟစ်သွားတယ်...စန္ဒီမြင့်လွင်လိုလည်း ပြောသေးတယ်..စုံသွားတယ်နော်..(ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်)..ဘယ်လိုတုန်း...သိနဲ့ ..ဘာမှ သိနဲ့ ..ပြောပြဘူး..သတ်ရင် သတ်ပစ်လိုက်..ဒါပဲ..
ကျေးဇူးပါ ချစ်ဝါ... ကျေးဇူးနော် .ကာရံလေး အေးအေးလည်းကြိုက်တယ် ပူပူလေးလည်းကြိုက် ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်တာတောင် ဘယ်ရောက်သွားလည်းတိဘူး ဟိဟိ... ... ဟုတ်တယ် maylay ရေ... အလုပ်တွေရှုပ် အရှု့ပ်တွေတော့ဟုတ်ဘူး...ကျေးဇူး..။ စိမ်းရေ... နက်နက်နဲနဲကို ထိသွားတာ .. ငါ့ညီမလေးအနော်ကတော့ ဟိဟိ ဆိုပြီးနားထောင်သွားလိုက်တာပဲ... ရွှေညာသူရေ ခံစားချက်တွေနဲ့ပေါ့လေ မြင်တယ်ပေါ့လေ... :P ချင်းတောင်းလေးကတော့ .. စွတ်စွတ်စွဲစွဲ လိုက်ဘုးတဲ့ လူနဲ့တဲ့... ညည်းရင်း ထိနေတာ သူမသိ...
သီချင်းလေးတွေကောင်းတယ်ဗျ ကျွန်တော် နားထောင်တဲ့ သီချင်းတွေပြောပြရင် ကိုပြည့်စုံ တော့ ဗိုက်နှိပ်ရယ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့.. ဟဟ :))
အဲဒီသီချင်းတွေ တပုဒ်မှ မသိဘူး တကယ်ပြောတာ စာပဲဖတ်သွားတယ်နော် နားမထောင်သွားဘူး အမှန်ပဲပြောတတ်တယ်နော် သိလား စိတ်တော့မဆိုးနဲ့
ဝံလေးက အရူးတမျိုးလေ ကိုယ်သိတဲ့သီချင်းဆိုရင် ဘယ်နှခါဖြစ်ဖြစ်နားထောင်တယ် ကိုယ်မသိတဲ့သီချင်းဆို ယောင်လို့တောင် နားမထောင်ဘူး ဒါကြောင့်နော် ကိုပြည့်စုံ ချိတ်ချိုးနဲ့ ဘိုင် တာ့တာ
မအားမှာစိုးလို့ မပြောတာပါ ဘာလိုတယ်လည်း
မပြောတတ်တော့ သင့်တော်သလိုသာ လုပ်ပေးပါဗျာ..
သီချင်းအားလုံးကို နားထောင်ခဲ့တယ်။ ကိုပြည့်စုံက စာရေးကောင်းတာပဲ။ သီချင်းနဲ့ အကြောင်းအရာကို ဆက်စပ်ရေးတတ်လို့လေ...
သီးချင်းကအေးအေးလေးနဲ့ ကောင်းတယ် အရာရာကို လေးလေးနက်နက်နဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့ကိုပြည့်စုံကို ညီမလေး လေးစားသွားပြီ
ညီလေးရေးလိုက်တဲ့တဂ်ပို့စ်ကို အခုမှတွေ့မိလို့ အခုမှပဲလာဖတ်ဖြစ်တော့တယ်.
အမှတ်တရပို့စ်လေးကို အလေးအနက်ထားပြီးရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေး..
ညီလေးကြိုက်တဲ့ ညည်းတတ်တဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးနီးပါးကို အကိုလည်းကြိုက်တယ် ခံစားလို့လည်းရတယ်.
အငဲဆိုထားပြီး မောင်မောင်ဇော်လတ်ရေးထားတဲ့ ”အိမ်”သီချင်းကို အကိုလည်း အခုတလော မကြာခဏဆိုသလိုနားထောင်ဖြစ်နေမိတယ်...
ကိုပြည့်စုံကြီးရေ သီချင်းလေးတွေခံစားသွားတယ်။ အစဉ်ပြေပါစေဗျာ။ အစဉ်ပြေမှာပါ ဟိုက်တင်းပေါ့နော်။ တခါတလေတော့လည်း အဲ့လိုပဲထင်ရဲ့ တခါတလေဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် အစဉ်မပြေမှုလေးတွေနဲ့ပါ။ အားလုံးအစဉ်ပြေပါစေဗျာ။ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ လမ်းကြုံရင် ပြောပေးပါ့မယ်နော် စိတ်ချ။ အဟိ
အိမ်သီချင်းကိုကြိုက်တယ်.. အိမ်ဆိုလို့ဗျာ ငနေရဲ့အိမ်လိပ်စာလေးတောင်းပေးပါလား ကျနော်ဒီကောင့်ဆီကိုပန်းချီကားတချပ်ပို့ချင်လို့ပါ..ဒီကောင့်ရဲ့
သီချင်းတွေ လာနားထောင်သွားပါတယ်... ကောင်းတယ်... ကိုပြည့်စုံရေ... ကူးလည်း ကူးသွားတယ်... သီချင်းလေးတွေ ကြိုက်လို့...:P
သီချင်းတွေကတော့ ရှယ်ပဲဗျာ လေးဖြူနဲ့ အငဲသီချင်းတွေ တော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ ဘာလို့ဆိုတော့ လေးဖြူ အငဲ၊မျိုးကြီးဆိုအသေကြိုက်ကိုးဗျး) အိမ်သီချင်းတော့ နားမထောင်ဖူးသေးဘူး ကျွန်တော်တော်တော်ညံ့သေးတာပဲ ကူးသွားတယ်ဗျာ ကျေးဇူး ကိုပြည့်စုံရေ
ဘယ်သူ့ပြောပေးရမှာတုန်းဗျ.. ဟီး.. ကြုံရင်ပြောပေးပါဆိုလို့ပါ...။
သီချင်းတွေကရှယ်ပဲနော် ကိုပြည့်စုံ ကြိုက်တယ်..
ဆိုတယ့် tag post ကလုပ်ကြံဇာတ်လမ်းကြီးပါ.